I-Ultrasound yamandla Wokukhiqizwa Kwezimonyo - Hielscher Ultrasound Technology
Ukucubungula kwe-ultrasonic kunenkundla eminingi yesicelo ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni izimonyo nokunakekelwa komuntu siqu.
Izicelo ze-ultrasonic embonini yezithokozi zihlanganisa ukukhipha imfucuza, ama-dispersions, ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana, ukulungiswa kwe-liposome, nokukhishwa kwamakhemikhali asebenzayo.
Imishini ye-ultrasonic itholakala ucwaningo ema laboratories kanye nokukhiqizwa okugcwele kwezohwebo kwamakhono amakhulu.
Ukucubungula kwama-ultrasonic of Cosmetic Liquids
Ukunakekelwa kwesikhumba kanye nemikhiqizo yezimonyo zokuhlobisa kufanele kufeze izinga eliphezulu lekhwalithi. Ubuchwepheshe bokucubungula okuthembekile kubalulekile ukuze uhlangabezane nale njongo. Amandla we-ultrasound a yi-homogenization enokwethenjelwa kanye neyindlela yokukhipha, eyenza imiphumela eyingqayizivele futhi ivumela ukukhiqiza imikhiqizo ebalulekile, emisha. Ukuze uhambisane nocwaningo lwezitho zomzimba nezentuthuko, ama-homogenizers anamandla futhi afanelekayo ayadingeka. I-Hielscher Ultrasonics ikuhlinzeka ngemishini ethembekile ye-ultrasonic yesigaba ngasinye sokucubungula – ukusuka ukuthuthukiswa kwezinhlelo ezintsha ebhokisini locwaningo kuya ekugcineni ukukhiqiza umkhiqizo wakho othengisa. Chofoza lapha ukuze ubone ububanzi obugcwele bama ultrasonicators kaHielscher!
I-Ultrasound iyindlela yokufakazela ukuveza ama-emulsions we-fine-size (W / O, O / W, O / W / O, W / O / W), njenge-mini-, nano- noma i-micro-emulsions, ama-emulsions amabili kanye ne-inversion yesigaba emulsions. Ngesikhathi homogenization ultrasonic, okukhulu cavitation ukuphoqa izingxenye ezimbili noma ezingaphezulu zokungabonakali zibe ngamaconsi amancane kakhulu. Ukusimama okukhulu kwe-emulsion kufezwa kokubili usayizi omncane we-droplet futhi polydispersity ephansi kokusabalalisa usayizi we-droplet. Ama-emulsions asebenza kakhulu ekukhiqizeni ama-creams, lotions, ama-serum, ama-oil, ama-balms, ama-gel & ama-gel oleo nama-wax.
Ukusakaza / ukumiswa
Ama-powders, i-pigments (isib. TiO2, ZnO) kanye namaminerali yizithako ezivamile emikhiqizweni yezitho zomzimba njengezikhwama, izikrini zelanga, isikhwama sezintambo, ne-nail polish. Ukuthola umkhiqizo ofanayo wekhwalithi ephakeme, i ngisho nokuhlakazeka futhi ukusatshalaliswa kwe-powder, pigment noma izinhlayiya zamaminerali kumele kuqinisekiswe. Njengoba i-ultrasound inikeza ama-dispersions amahle ajwayelekile, kuyindlela yokwenza i-homogenization.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuhlakazeka kwe-ultrasonic!
I-particle Size Distribution / Ukukhokha
Ikakhulukazi yezimonyo zokuhlobisa, i-pigments kufanele ilandiswe kumbono we-micron ne-sub-micron futhi kufanele ihlakazeke ngokufanayo emkhiqizo. Lapho amagagasi amakhulu e-ultrasonic ehlanganiswa abe yiziphuzo kanye ne-viscous, i-pasty slurries, i-cavitation ye-ultrasonic imiphumela ephezulu ye-shear ekwazi ukugawula izinhlayiya nezingulube phansi sub-micron futhi nano usayizi. Ikakhulukazi yezimonyo zokuhlobisa (isib. I-mascara, i-nail polish, i-lipstick, i-make-up), ukusabalalisa usayizi omuhle wezingulube kuyimpawu ebalulekile yekhwalithi.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic usayizi wezinhlayiya usayizi ukunciphisa!
I-Ultrasound yindlela yokushesha kakhulu futhi ephumelelayo yokuthuthukisa isivuno sezingxenye ezisebenzayo ezikhishwe ezitshalweni, isb antioxidants, polysaccharides, terpenes, nama-phenolic compounds. Njengendlela engeyona ye-thermal, i-ultrasound iyakhipha ama-compounds ngendlela enobumnene ukuze kungonakaliswe nokulimala. Ngaphandle kwe a isivuno esiphezulu sezingqikithi, inzuzo ye-ultrasonic isizinda esetshenziswa ngokusetshenziswa kwe-green extraction solvent (isb. amanzi) noma ukusetshenziswa kwe-solvent encane, izinga lokushisa eliphansi, futhi kakhulu nciphisa isikhathi sokukhipha. Isizinda se-ultrasonic yindlela yokucwaninga kahle futhi kuye kwafakazelwa ngempumelelo yamakhemikhali amaningi asebenzayo njenge-ascorbic acid (i-vitamin C), i-α-tocopherol (i-vitamin E) ne-β-carotene (i-provitamin A), i-co-enzyme Q10, noma i-fericile i-asidi.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwamagagasi e-ultrasonic kungathuthukisa izindlela zendabuko yesikhumba ezifana ne-Soxhlet extraction, CO-supercritical2 isizinda kanye ne-enzymatic extraction (isb. for collagen).
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic isizinda!
Amakhemikhali asebenzayo kufanele ahlanganiswe ukuze afakwe esitokisini esikhumba esijulile lapho kufanele aveze imiphumela yabo egcwele. I-Liposomes iyisiphathimandla esivamile samakhemikhali asebenzayo nama-API. I-Sonication iyithuluzi elithembekile zihlanganisa izinto ezitholakala kuma-liposomes futhi ukuyihambisa emkhiqizo wokugcina. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonically-assisted encapsulation yama-liposomes!
Amagagasi e-ultrasound asebenza kahle kakhulu ukuze ahlakaze futhi ahlaziye isigaba ezimbili noma ngaphezulu zibe yi-an umkhiqizo ofanayo. Amandla amakhulu e-shear ultrasonic asiza ekuqothuleni ama-powders, isib. I-allantoin powder Homogenization yisinyathelo esibalulekile sokuthola umkhiqizo ophezulu ophethe izici ezihlala njalo. Ngakho-ke, i-ultrasound yindlela ekhethwayo uma kuziwa ekusetshenzisweni kokuqedwa kanye ne-homogenization.
I-proksi ultrasonic enamandla ka-1.5kW I-UIP1500hd
I-Ultrasonic flow flow reactor for processing okuqhubekayo.
Ukuthuthukiswa & Ukuhlaziywa ku-Laboratory
Hielscher Amadivayisi we-Ultrasonic Laboratory zilungele ukucwaninga nokuthuthukiswa kanye nezinqubo zemihlahlandlela. Amadivaysi afana ne-handheld UP100H afanele izicelo eziningi, isib Ukuxuba, Ukuhlakazeka, Emulsifying, I-homogenizing, ukuhlukana noma ukuqedwa. Amadivayisi we-laboratory kulula ukuyisebenzisa, futhi abe nokusebenza okungalingani nokuguquguquka. Wonke amadivaysi angalawulwa ngokuqondile ukuze ukukhiqizwa kokulinganisa kuze kube semkhakheni wokukhiqizwa kuqinisekisiwe.
I-reactor ye-ultrasonic ihlanganisa i-reactor vessel kanye ne-ultrasonic i-sonotrode. Le yodwa ingxenye, okumele igugu futhi ingashintshwa kalula ngaphakathi kwamaminithi. Amaplangipi okugcoba-oscillation avumela ukufaka i-sonotrode zibe izitshalo ezivulekile noma ezivaliwe ezicindezelayo noma amaseli okugeleza kunoma yikuphi ukuma. Awekho okudingekayo okudingekayo. Ama-reactor cell asegeleza ngokuvamile akhiwe ngensimbi engagqwali futhi abe nama geometri alula futhi angakwazi kalula kalula futhi usuliwe. Awekho ama-orifice amancane noma amacembe abufihliwe. Izigameko ezikhethekile ze-flow cell (cell-reactors) zihlangana ne-CIP ethuthukile (ihlanzekile-indawo) kanye nezidingo ze-SIP (inzalo-in-place) nazo ziyatholakala.